Driver (ကားသေး) | Shwe Byain Phyu Co.,Ltd
1.Auto, Manual မောင်းနိုင်ရမည်။
2. ဘယ်ထိုင်/ ညာထိုင်မောင်းနိုင်ရမည်။
3. ရန်ကုန်မြို့တွင် လမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနိုင်ရမည်။
4. စည်းကမ်းရှိပြီး ရိုးသား ကြိုးစားသောသူ ဖြစ်ရမည်။
5. စကားပြော ပြေပြစ်ပြီး အများ နှင့် ဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
2. လိုင်စင် သက်တမ်း အနည်းဆုံး (၂) နှစ်အထက်ရှိရမည်။
3. အသက် (၃၀) အောက်ဖြစ်ရမည်။
Driver (Urgent) Green Myanmar Construction Co.ltd Driver(အိမ်စီးကား) Moon Sun Co.,Ltd ( Construction & Trading ) Driver (Female) Haven Co., Ltd Dump Truck Driver Moon Sun Co.,Ltd ( Construction & Trading ) Driver (For Mandalay) Hyper Power Co.,Ltd Driver Barons Group of Companies (Barons & Fujikura) Driver La Pyi Wun Co.,Ltd Store Keeper Cum Delivery Driver YONMING AUTO (MYANMAR) CO LTD Backhoe Driver M.K.T Construction Driver M.K.T Construction Delivery Driver Melbourne Co.,Ltd Driver Myint Thukha Nadi A Group of Companies Refueller Driver Puma Energy International DRIVER Shwe Byain Phyu Co.,Ltd